Otu esi etinye WP-CLI na Linux Server maka WordPress - LinuxCapable
Otu esi etinye WP-CLI na Linux Server maka WordPress
September 17, 2021 August 8, 2021 by Jọshụa James
Wụnye WP-CLI na Linux
WP-CLI is interface iwu-ahịrị maka WordPress. The WP-CLI bụ ngwa na-enyere gị aka ịmekọrịta na gị WordPress saịtị ozugbo site na iji iwu na interface dabere na ederede. Ọ dịkwa oke oke, na-egosipụta iwu dị iche iche nwere ike ime. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ị nwere ike ime na azụ azụ nke saịtị gị, ị nwere ike ime ngwa ngwa site na iji WP-CLI.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye WP-CLI na sava Linux ọ bụla.
OS akwadoro: Sistemụ arụmọrụ Linux ọ bụla.
Akụrụngwa achọrọ: WordPress
Ngwungwu akwadoro: curl ma ọ bụ wget
Ụzọ kachasị mfe na akwadoro iji wụnye WP-CLI on your Server Linux bụ ibudata na Phar faịlụ. N'ime nkuzi a n'okpuru, ị ga-ahụ ọmụmaatụ sitere na otu Ihe nkesa Ubuntu 20.04. Agbanyeghị, iwu ndị a ga-arụ ọrụ na ọtụtụ Sistemụ arụmọrụ Linux.
Mbụ, budata faịlụ phar site na iji curl jiri iwu a nyere iwu:
Ọzọ, ịkwesịrị ịchọpụta na faịlụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma dịka ndị a:
Ị ga-achọ ugbu a ime WP-CLI nwere ike ime ya site na iji iwu a:
N'ikpeazụ, bugharịa executable:
Iji nwalee ma ọ bụrụ WP-CLI arụnyere nke ọma, jiri iwu a:
Ka iwelite WP-CLI bụ usoro dị mfe. Ọ nwekwara nhọrọ kwụsiri ike na nhọrọ abalị maka ndị ọzọ egwuregwu.
Ka imelite site n'iji ọkọlọtọ kwụ ọtọ, jiri iwu a:
Mara, ma ọ bụrụ na faịlụ a nwere mgbọrọgwụ, ị nwere ike iji ohere sudo dị ka ndị a:
Iji wụnye ihe owuwu abalị, jiri ihe ndị a:
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye ya WP-CLI on your Linux ihe nkesa. N'ozuzu, WP-CLI dị mma, karịsịa maka ịgba ọsọ ụfọdụ cron site na ụfọdụ plugins nwere nkwado WP-CLI. Ọ nwere ike ịbụ njirimara na akụrụngwa bara uru ịnwe n'ozuzu ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ WordPress.
Maka ozi ndị ọzọ maka iji WP-CLI, gụọ ndu mbido ngwa ngwa.
Categories Nkuzi CMS Tags WordPress Mail igodo
Otu esi etinye phpMyAdmin kacha ọhụrụ na LEMP na Ubuntu 20.04